Maxaa kusoo kordhay ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya? (AKHRISO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa kusoo kordhay ku dhawaaqista golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya? (AKHRISO)
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaarayo xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in weli uu halkaasi ka soconayo dadaaladii ugu dambeeyay ee soo xullista iyo magacaabida golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya.
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa la sheegayaa inuu haatan wado dadaaladii ugu dambeeyay uu ku doonayo inuu kusoo magacaabo xubnaha ka mid noqonaya golihiisa wasiiradda cusub ee Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu waaweyn uu diiradda saarayo ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah;
– In tirada golaha wasiirada cusub aysan ka badan 20 illaa 25 wasiir.
– In xubnaha wasiirada ah ee lasoo magacaabi doonno 30% ay noqdaan haween
– In qofka ka mid noqonaaya xukuumadiisa cusub uu khibrad u lahaado xilka uu usoo magacaabayo
– In qofka uu soo magacaabayo uu ahaado shaqsi nadiif ah aan hore dambiyo usoo galin
Caqabadaha weli hortaagan ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ah;
1- Nidaamka awood qeybsiga beelaha ee xilalka muhiimka ah.
2- Shaqsiga ka mid noqonaya golaha wasiirada iyo dhinaca loo badinaayo xildhibaanada iyo dadka ka baxsan.
3- Kala xulashada shaqsiyaadka balanqaadyada hore u heysta iyo kuwa cusub.
4- Tiro ahaan inta wasiir ay noqonayaan xukuumada cusub.
Ugu dambeyntii, ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa haatan laga sugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan kahor bishaan 30-keeda uu kusoo magacaabo golaha wasiirada cusub ee ka mid noqonaya xukuumadiisa cusub ee Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaateem, inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn xilliga uu ra’iisul wasaaraha ku dhawaaqi doonno golaha wasiiradiisa cusub ayaa hadane warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heshay waxay sheegayaan in todobaadka soo socdo uu si kama dambeys ah ugu dhawaaqi doonno, balse ay dhici karto in isbadel uu yimaado.